FAAFINTA UBAXYADA BY BEGONIAS BY GOOYN AT GURIGA: SIDA LOO ABUURO WARSHAD LEH CALEEN AMA QAABKA STEM, SIDA LOO XIDHO EE BIYAHA, WAXA LA SAMEEYO KA DIB? - GURI, GURI
Cherenkovy - mid ka mid ah beeralayda ubax ugu jecel jecel of begonias taranta. Waa wax sahlan oo wax ku ool ah: xitaa a jacaylka caleemaha casri ah ayaa ka soocaya jirida curonia, xididkiisa, iyo horeyba 3-4 bilood kadib wuxuu ku raaxeeyaa quruxda geedka ubax cusub. Faahfaahin ku saabsan habka taranta this waxaa laga heli karaa maqaalkan. Waxaan kuu sheegi doonaa sida loo kiciyo soo kicinta gudaha guriga, sida geedi socodka loo qabsado, sida loo diyaargaroobo, sida loo abuuro iyo xididka gooynta, iyo sidoo kale daryeelka dambe iyo dhibaatooyinka suurtagalka ah.
Begonia waxay ku dhacdaa siyaabaha soo socda.:
Caawimaad! Gooyo waa qaybta kala geddisan ee dhirta (caleen, dhalatada), iyo udbeedku waa dhalmo dhirin iyadoo la isticmaalayo jarida. Faa'iidada habkan ah ee begonias taranta waa dhaxalka dhammaan tayada dhirta hooyada, oo ay ku jiraan midabka ubaxa iyo caleemo.
Sidee loo gooyaa?
In kasta oo xaqiiqda ah in goynta la samayn karo wakhti kasta oo sanadka ah, waxaa fiican inaad sugto guga. Xaqiiqdu waxay tahay in guga, begonia galaa wajiga firfircoon ee dhirta: unugyada cusub waxay bilaabaan inay sameeyaan si xoog leh sababtoo ah dardargelinta geeddi-socodka dheef-shiid kiimikaadka ee ku dhaca. Qalabaynta habka firfircoon ee koritaanka firfircoon - xaaladaha cimilada wanaagsan (qorraxda badan, diiran), taas oo beddeshay jiilaalka.
Noocyada wax lagu beero
Begonias waxay leeyihiin noocyo dhawr ah oo gooyn ah.: caleen, apical, stem.
Caleen caleen waa caleen gooni ah ee begonia, taas oo, ka dib markii rooting, lagu beeray karaa dheri ah. Sida doorasho: caleemaha curonia waa la googooyaa, iyo jajabyada ay keentay waxaa lagu beeray dhulka si loo xidho.
Xididada cirridka ah waa geed laga gooyo dhirta hooyada, taas oo markaa qaadata xidid.
Laga soo bilaabo substrate, guntooda stem waxaa laga yaabaa in ay bilaabaan inay si firfircoon uga soo baxaan August - September. Way ku habboon yihiin in la xidho, inta badan waxay horey u leeyihiin xididada, taas oo si weyn u fududeyn doonta geedi socodka dhalashada dhirta.
Xidid caleen ah.
Mid ka mid ah caleen caafimaad leh, mid dhexdhexaad ah ama weyn oo caleemo curonia ah ayaa la doortaa. Si looga hortago dhacdooyinka cudurrada faafa, waxaa lagula talinayaa in lagu daweeyo caleen oo leh fungicide.
Cadaadiska dabiiciga ah.
Caafimaad, xoog leh, oo aan muuqan waxyeello muuqata, oo aan lahayn ubax aan lahayn ubax oo ah 8-12 cm dheer ayaa la doortaa. Gooyuhu waa inuu ka hooseeyaa boodhka, iyo boobka waa inuu jiraa caleen ama laba caleemo ah.
Haddii ay jiraan caleemo badan, markaa kuwa hoose waa in laga saaraa si looga hortago cagaha. Caleenta jarjaran oo leh isla ujeedadaas waxaa lagula talinayaa in la qalajiyo hawada dhowr saacadood.
Si loo soo saaro dhalinyaro dhalinyaro ah oo dhulka hoostiisa ah, waxaad u baahan tahay inaad si adag u qaadato xuddunkeeda, iyo, inaad u dhisto jihooyin kala duwan, si tartiib ah kor ugu qaad. Waxay jebin doontaa meesha "saxda ah", badanaaba laamo.
Haddii gooynta sii kordhaya ee substrate yihiin horeba leh burooyinkeeda, ka dibna waa in laga saaro: Dhammaan xoogga ee warshadda dhalinyarada waa in lagu kharash gareeyaa horumarinta xididka iyo go'doomin.
Ka dib markii xididdada ka goynta, iyadoo aan loo eegin habka of rooting, gaari 0.7 - 1.5 cm dherer, waxaa lagu beeray dheriga shakhsi.
Dusha hoose ee taangiga (waa inuu jiraa daloolka si uu biyaha u daadiyo) waxaa ka buuxsami kara dheecaan (dhoobo ballaaran, dhagaxyo, leben jabay), ka dibna leh substrate.
Ka dib markaad dhulka dushiisa ka sameysey dherer, waxaad dhigtaa seedling ee dheriga, si tartiib ah u toosiso xididadiisa, haddii rooting hore loogu sameeyey biyaha.
Habka ugu fiican ee laga beerto geedo yar yar oo kufilan dhulka - habka kala-guurka:
Warshadu waxay ka timaaddaa taangiga, iyada oo aan la ruxin jilitaanka dhulka, waxaa la dhigayaa dheri cusub.
Lakabka ugu sareeya ee carrada ee asliga ah waxaa lagu jajabiyaa by gacmaha, geedka waxaa la waraabiyaa iyo meel dhigay.
Caawimaad! Goobta begonias waa inay ahaato dabacsanaan iyo iftiin. Doorashada ugu fudud waxay tahay inaad soo iibsato substrate-ka diyaar u ah dukaanka ubaxa.
Waxaad isku dhejin kartaa dariiqa lagama maarmaanka ah gacmahaaga. Waxaa jira cuntooyin dhowr ah oo loogu talagalay ciidda guriga.:
Ciidda soodhiga, humus, peat, compost khudradda iyo ciid yar oo aan biyuhu lahayn ayaa isku qasan.
Isku dar ah peat iyo ciid aan qalafsaneyn ayaa loo isticmaalaa 1: 1. Isku dar ah, waxaad ku dari kartaa humus yar.
Sidee loo asaasaa?
Xaashida ballaaran ee curonia ayaa la gooyaa jajabyada qaab saddex xagal ah, mid kasta oo ka mid ah waa inuu ka kooban yahay 1 - 2 xidid.
Qaybaha waxaa lagu baari karaa dhuxul la dhaqaajiyey, waxaad awoodi kartaa "iyo xidid".
Dheeraad ah, mid kasta oo ka mid ah qaybaha waxaa lagu aasay substrate qoyan by 5-7 mm, lakabka sare ee ciidda ah wax yar wax lagu jajabiyey by gacmaha si loo hagaajiyo ka mid ah qaybaha beeray ee xaashida.
Sida ikhtiyaari: caleemaha curonia waxaa la gooyaa xididdada xididada meelo kala duwan oo lagu dhajiyo substrate qoyan, halkaa waa in lagu riixaa dusha sare ee qashinka ama cadayga.
Caleen dhexdhexaad ah ayaa lagu rujin karaa biyo.. Si arrintan loo sameeyo, caleenka leh asliga ah waxaa lagu dhejiyaa weel biyo ah, kaas oo kiniinada kaarbiyaysan ee horay loo tirtiray. Dharka caleen marinka waa ilaa inta muuqaalka xididada.
Waxaa sidoo kale laga dhigi karaa laba siyaabood: biyo ama isla markiiba dhulka.
Biyo baxsan oo biyo ah ayaa lagu shubay dareeraha ku shubay weel ka samaysan muraayad madow ama caag ah. Ha ku buuxin taangiga oo dhan biyo: waa inay noqotaa mid aad u badan oo loo baahan yahay si aad ugu qulqulato oo kaliya qaybta hoose ee caleemaha.
Biyaha waxaad u baahan tahay inaad kala gooyo kiniin ah kiniinada firfircoon iyo waxoogaa daroogada ah - kiciyaha kobcinta kobaca ("Kornevin").
Haddii xididida daboolo dhulka, waa in marka hore lagu rusheeyaa biyaha oo leh caarad, ka dibna kicin kobcin ah. Intaa ka sokow, xagasha 45 darajo, caleemaha wuxuu u baahan yahay in lagu aaso 2-3 cm carrada qoyan.
Haddii jarida aan laga saari karin substrate leh xididada, waa in la rujin biyo. si la mid ah sida jirida. Oo haddii caleemaha yar yar hore u leeyihiin xididdada horumarinta, ka dibna waxaa lagu beeray karaa dhulka.
Digniin! Xaaladda ugu muhiimsan ee nooc kasta oo xididid ah waa meeleynta xiga ee jarista jarista ee gogol-yar-yar-yar: heerkulka sare iyo qoyaanka ayaa lagama maarmaan u ah horumarinta nidaamka xididka.
Xaaladaha noocan oo kale ah ayaa la gaari karaa iyada oo la gelinayo weel ku xiran bac caag ah, weel caag ah oo caag ah oo leh dabool adag ama xirmo caag ah. Iyadoo ay soo ifbaxday geedka kiriimyada ugu horreysa waa laga saari karaa. Laakiin sidoo kale waa muhiim in la xusuusto in sida loo sameeyo aqalka dhirta lagu koriyo si loo furo maalin kasta hawo-qaadashada, haddii kale baxsigu wuxuu noqon karaa mid uun.
Maxaa la sameeyaa kaddib?
Gooyn Begonia horay loo beeray dheriyo shakhsi ahaaneed waa in la dhigaa meel quruxsan, iyo qorraxda toos ah on caleenta dhirta dhalinyarada waa in laga fogaadaa. Doorashada ugu fiican waa waqooyiga, waqooyi-galbeed, daaqadaha waqooyi-bari.
Heerkulka ugu wanaagsan ee koritaanka begonias - + 20C - + 22C.
Geed dhalinyaro ah ayaa badanaa la waraabiyaa, laakiin waxoogaa yar ayaa yar. Waxaa muhiim ah in aan loo ogolaan qoyaan xad dhaaf ah ee substrate, haddii kale begonia wuxuu u dhiman doonaa lakab.
Moobeyaal laguma talin: begonia ma jecla dhibcaha biyaha ee caleemaha iyo ubaxa. Si loo kordhiyo heerka qoyaanka ee cimilada kulul iyo qallalan, waxaad ku dhejin kartaa weel biyo ku xiga dheriga, ama dhejiga ku daboolan dhoobo la ballaariyey, taas oo ay tahay in marar badan lagu waraabiyo biyo.
Dharka ugu sarreeya waxaa sameeyay bacriminta macdanta culus, oo lagu iibiyo dukaamada ubaxa, laga bilaabo guga ilaa dayrta 1 - 2 jeer bishiiba.
Qaybta kobcitaanka ee jarida, kaas oo laga soo saaray substrate, bilaabay inuu qudhmi. Tani waxay dhacdaa haddii guntooda lagu qaato muddada ubax firfircoon ee warshad hooyada.
Burooyinkeeda microscopic, horeyba u muuqanaya gacanta oo aan weli muuqanin indhaha qaawan, weynaatay. Tani maaha mid cabsi badan, maadaama begoniasku leeyihiin burooyin badan "hurdo" oo ku yaal xuubaha caleen kasta, iyo jirida noocaas ahi waa mid aad u macquul ah. Tani waxay dhacdaa inta badan.
Young begonias dhalinyarada muujisaa calaamadaha cudurrada faafa (loos, dhibco budada, iwm). Si looga hortago dhacdo this, waxaa lagu talinayaa in jeermiska ciidda, dheriyo kaas oo gooyn la beeray (daaweynta fungicide, daaweynta kulaylka).
Jeex jeexan. Xaaladda Tani waxay suurtogal tahay in la helo waraabin xad dhaaf ah. Sidoo kale, ha iloobin hawada maalinlaha ah ee "lagu koriyo", taas oo aasaasida dhirta.
Markaad sameysey sahlan sahlan oo ku saabsan qaliinka iyo dhaliinka dhirta, waad ku farxi kartaa naftaada iyo dadka aad jeceshahay si aad u aragto quruxda ilbiriqsashada dhalaalaya in ka badan hal sano. Xaaladda ugu weyn - waafaqsan dhammaan shuruudaha daryeelka iyo dayactirka ubaxa.